Reflow Soldering process dia dingana iray lehibe hahazoana kalitao tsara. Ny milina soldering Fumax reflow dia manana 10 temp. faritra. Mampifanaraka ny temp izahay. isan'andro isan'andro mba hiantohana ny temp marina.
Ny soldering Reflow dia manondro ny fanaraha-maso ny fanafanana hampiempo ny solder hahatratra ny fifamatorana maharitra eo amin'ireo singa elektronika sy ny board circuit. Misy fomba fanavaozana samihafa amin'ny fametahana, toy ny lafaoro fitaratra, jiro fanafanana infrared na basy rivotra mafana.
Tao anatin'izay taona lasa izay, miaraka amin'ny fampivelarana ny vokatra elektronika amin'ny làlan'ny habe kely, ny lanjan'ny maivana ary ny hakitroka avo lenta dia tokony hiatrika fanamby goavana ny soldering. Ny fametahana reflow dia takiana amin'ny fampiasana fomba fandrosoana hafanana mandroso kokoa hahatratrarana fitsitsiana angovo, fanamiana ny maripana, ary mety amin'ny fitakiana sarotra amin'ny soldering.
（1 gr Gradientan'ny mari-pana lehibe, mora fehezina ny fiolahana mari-pana.
（2） Ny famafazana solder dia azo zaraina marimarina, miaraka amin'ny fotoana fohy kokoa ary tsy azo afangaro amin'ny loto.
（3） Mety amin'ny fametahana karazana singa avo lenta sy be fangatahana.
（4 process Dingana tsotra sy kalitaon'ny soldering avo.
2. Fanomanana ny famokarana
Voalohany, ny pasteur solder dia voatonta tsara amin'ny takelaka tsirairay amin'ny alàlan'ny lasitra fametaka solder.
Faharoa, ny singa dia apetraka eo amin'ny solaitrabe amin'ny milina SMT.
Aorian'ny fanomanana tanteraka ireo fanomanana ireo dia vao manomboka ny soldering tena izy.
Ny soldering Reflow dia mety amin'ny SMT, ary miasa amin'ny milina SMT. Rehefa miraikitra amin'ny takelaka boribory ny singa dia mila tanterahina amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny refow.
4. Ny fahafahantsika: Sets 4
Marika ： JTTEA 10000 / AS-1000-1 / SALAMANDER
（1） Ny soldering reflow dia ampiasaina amin'ny singa chip; Ny famolahana onja dia natao indrindra ho an'ny plug-in solder.
（2） Ny soldering reflow dia efa misy solder eo alohan'ilay lafaoro, ary ny pacte solder ihany no atsonika ao anaty lafaoro mba hamoronana mpiray solder; Ny fametahana ny onja dia atao tsy misy solder eo alohan'ny lafaoro, ary apetaka ao anaty lafaoro.
（3） Soldering miverina: ny endrika rivotra avo lenta dia maneho solder ho an'ny singa; Soldering Wave: Solder Molten dia mamolavola soldering onja amin'ny singa.